IHIE NA-EFU GDIPLUS.DLL - DLL - 2019
Debe njehie gdiplus.dll
Ndị na-emepụta smartphones na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ Xiaomi mara taa maka ndị niile Fans nke gam akporo ngwaọrụ. Ọtụtụ ndị maara na njem mmeri nke ịga nke ọma Xiaomi amaliteghị na mmepụta nke ngwaọrụ, kama site na mmepe nke gam akporo-firmware MIUI. Ebe ọ bụ na ọ dị ogologo oge gara aga, ọkpụkpụ ahụ ka dị mkpa n'etiti ndị ọkachamara nke omenala na-eji MIUI dị ka OS na smartphones na mbadamba nke ndị nrụpụta dị iche iche. Na n'ezie, ngwangwa ngwọta ngwaike sitere na Xiaomi na-arụ ọrụ n'okpuru MIUI.
Ka ọ dị ugbu a, e mepụtawo ọtụtụ ọganihu mmepe nke ọma, na-emepụta ihe a na-akpọ na-arụpụta ma na-arụ ọrụ ntanetị, nke kwesiri iji ma ngwaọrụ Xiaomi ma ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta ndị ọzọ. Xiaomi n'onwe ya na-enye ndị ọrụ ọtụtụ ụdị MIUI. Ụdị ụdị dịgasị iche iche na-emekarị ka ndị ọrụ nchịkọta nke usoro ihe a ghara ịdị, ha enweghị ike ịghọta ọdịiche dị n'etiti ụdị, ụdị na nsụgharị, ihe kpatara ịjụ imelite ngwaọrụ ha, ebe ọ na-efu ọtụtụ ohere.
Tụlee ụdị nkịtị na ụdị MIUI, nke ga-ekwe ka onye na-agụ ya chọpụta ihe niile na-enweghị nghọta, na emesị ọ dị mfe ịhọrọ usoro kacha mma nke usoro maka ụdị ihe atụ nke ama ma ọ bụ mbadamba.
Miaụọrụ MIUI nke Xiaomi
Ngwọta kachasị mma maka ndị ọrụ nkịtị bụ n'ọtụtụ ọnọdụ bụ iji ngwanrọ ọrụ nke onye nrụpụta ngwaọrụ mepụtara. Maka ndị Xiaomi ngwaọrụ, onye mmemme sitere na Team MIUI na-enye nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ha ọtụtụ ngwa ngwa ngwa, iche iche site na ụdị, dabere na mpaghara ebe, na ụdị, dabere na ọnụnọ ọrụ na ike na ngwanro ahụ.
Ya mere, dabere na njikọ mpaghara, nsụgharị nke MIUI bụ:
China ROM (Chinese)
Dị ka aha ahụ pụtara, a na-atụ maka ndị China si China. Na ngwa ngwa a, e nwere naanị asụsụ abụọ - asụsụ Chinese na Bekee. Ozokwa, ngosipụta ndị a bụ enweghị enweghị ọrụ Google ma na-ejikarị ngwa ngwa ndị a na-etinye na Chinese.
Onye ọrụ njedebe nke software zuru ụwa ọnụ, dị ka onye na-emepụta ya, kwesịrị ịbụ onye ọ bụla zụrụ ngwaọrụ Xiaomi nke na-adị ndụ ma na-eji ama / mbadamba nkume na mpụga China. A na-enye ngwa ngwa a iji nwee ike ịhọrọ asụsụ ogbi, gụnyere Russian, nakwa nke a na-enweghị site na ngwa na ọrụ ndị na-arụ ọrụ na China. Enwere nkwado zuru oke maka ọrụ niile nke Google.
Na mgbakwunye na mpaghara mpaghara n'ime Chinese na ụwa, MIUI firmware na-abịa na Stable, Onye Mmepụta, na Alpha ụdị. MIUI nke Alpha na-adị maka nọmba ole na ole nke ụdị ngwaọrụ Xiaomi ma nye ya naanị ndị ọrụ nke femụwe China. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji Ngwọta Onye Mmezi, nke na-adịkarịghị Onye Mmepụta. Esemokwu dị n'etiti ha bụ ndị a.
Na nsụgharị Stable nke MIUI, enwereghị njehie dị njọ, ha na-edekọ aha ha, ya bụ, ha bụ ndị kachasị mma. N'ịkọwa, anyị nwere ike ịsị na Stable firmware MIUI n'oge ụfọdụ bụ nkọwa na nke kachasị mma site n'echiche onye ọhaneze. Enweghị oge a kara aka site na mpempe akwụkwọ ọhụrụ nke ngwa ngwa siri ike. A na-emekarị emeputa ugboro ọ bụla n'ọnwa ọ bụla.
Onye Mmepụta (Onye Mmepụta kwa izu)
Ụdị ngwanro a bu n'obi maka ndị ọrụ dị elu, yana maka ndị na-achọ ịnwale ihe ọhụrụ. Onye na-emepụta ngwa ngwa firmwares nwere, ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nsụgharị nke ụlọ, ụfọdụ ihe ọhụrụ nke ndị mmepe, mgbe a nwalechara, na-eme atụmatụ itinye aka na Stable. Ọ bụ ezie na nsụgharị Ndị Mmepụta kachasị ọhụrụ ma na-aga n'ihu, ha nwere ike ịmara ihe ụfọdụ. Ụdị OS a na-emelite kwa izu.
Download ukara MIUI
Xiaomi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-egbo mkpa nke ndị ọrụ ya, nke a gụnyere ike ibudata ma wụnye nchịkọta ngwanrọ. Enwere ike ibudata ụdị ugbochi niile na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta site na ịpị njikọ ahụ:
Download MIUI ngwa ngwa si na saịtị Xiaomi
Na nchịkọta akwụkwọ ikikere Xiaomi na-ebugharị n'ụzọ dị mfe. Iji nweta ngwanrọ ngwanrọ nke ọma maka ngwaọrụ gị, dị nnọọ họrọ ngwaọrụ na listi nke akwado (1) ma ọ bụ chọpụta ihe nlereanya site na nchọta ọchụchọ (2).
Ọ bụrụ na achọrọ ngwugwu maka nwụnye na smartphone / mbadamba Xiaomi, mgbe ị kọwachara ụdị ahụ, nhọrọ nke ụdị software na-ebudata na-adịnụ - "China" ma ọ bụ "Global".
Mgbe ịchọtara njikọ mpaghara maka ngwaọrụ ndị Xiaomi mere, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ site na isi ihe abụọ: "Stable ROM" ma "Onye Mmepụta ROM" nsụgharị ọhụrụ dị ugbu a.
Maka ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta nke ọzọ, nhọrọ nke Onye Mmepụta / Stable anaghị adị. Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ nke ngwaọrụ nke Xiaomi tọhapụrụ ga-ahụ naanị onye nrụpụta ngwa ngwa
na / ma ọ bụ ịbanye (s) maka otu ngwọta ngwaọrụ (s) sitere n'aka ndị mmepe nke ịnụ ọkụ n'obi nke ndị ọzọ.
Iji malite ibudata na pịa "Download Full ROM" na ebe njirimara software nke onye ọrụ.
Mgbe ịmechara ihe ndị ahụ dị n'elu, onye ọrụ ahụ na-echekwa ngwugwu ahụ na diski ike nke kọmputa ma ọ bụ icheta ngwaọrụ gam akporo maka nwụnye site na ngwa ngwa "Nwelite usoro" Ngwa Xiaomi.
Maka ngwa ngwa maka ngwaọrụ site na ndị ọzọ na-emepụta, ha na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ site na TWRP gbakee gburugburu ebe obibi.
Fastboot firmware si MIUI Team Team
Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa fastboot firmware maka ngwaọrụ Xiaomi, nke a na-etinye site na MiFlash, ịkwesịrị iji njikọ ndị a:
Ibudata ngwa ngwa fastboot nke Xiaomi smartphones maka MiFlash site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị
Ibudata ihe ndekọ na faịlụ maka nwụnye site na MiFlash bụ usoro dị mfe. O zuru ezu ịchọta aha njikọ iji budata faịlụ site na ngwanrọ software nke ngwaọrụ gị,
wee site na aha ndị ahụ chọpụta ụdị na ụdị nke ngwanrọ, na ịmalite ibudata ngwugwu, pịa bọtịnụ achọrọ.
Leekwa: Otu esi eme ka Flashia Xiaomi smartphone site na MiFlash
Tupu ịbanye n'ahịa ụwa na ịnweta nnukwu ewu ewu, Xiaomi, dịka e kwuru n'elu, na-etinye aka na mmepe nke mgbanwe nke kpamkpam nke gam akporo. Eleghị anya n'ihi enweghị mmalite nke otu nnukwu ìgwè mmepe, mbụm nke MIUI abụghị nkewa na China na Global, ma a sụgharịghị ya n'asụsụ dị iche iche, gụnyere Russian.
N'otu oge ahụ, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị iche iche nke ndị na-emepụta ihe, tinyere ohere dịgasị iche iche, ndị na-anụ ọkụ n'obi na gburugburu ụwa, gụnyere site na mba dị iche iche na-asụ Russian. Ya mere, ndi otu ndi mmadu nwere otu obi di iche iche ndi gbakotara onwe ha ndi mmadu ndi choro akwukwo di iche iche site n'aka MIUI site na ndi mmepe ozo.
Ndị na-arụ ọrụ ndị dị otú ahụ na-etinye aka na mpaghara na mmelite nke MIUI, ihe ngwọta nke ngwa ngwa ha dị njikere dị ka nsụgharị nsụgharị nke software Xiaomi, na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ karịrị ha. Ọzọkwa, ihe niile edere ROM na-adabere na femụwe China, nke mere na a na-etinye ha na ntọala ụlọ ọrụ site na ntọala na arụmọrụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ịwụnye MIUI dị na ya na ngwaọrụ nwere ngwa bootloader nwere ike imebi ha!
Tupu ibido nbudata ma wụnye ihe ngwọta, nke a ga-atụle n'okpuru ebe a, ịkwesịrị ịmeghe bootloader site na isoro ntuziaka dị na isiokwu:
MIUI Russia (miui.su) bụ otu n'ime ìgwè ndị mbụ nke mgbalị ha mere ka onye ọrụ MIUI na-akwado saịtị na Russia. Ndị a na-anụ ọkụ n'obi na-etinye aka na mpaghara nke sistemụ arụmọrụ MIUI, yana akwụkwọ Xiaomi nwere ikikere na Russian, Belarusian na Ukraine.
Download dị njikere maka echichi site na MRUI TWRP maka Xiaomi smartphones na mbadamba, yana ọdụ ụgbọ mmiri maka ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta nke ọzọ, biko gaa na saịtị MIUI Russia.
Download miui.su firmware site na saịtị ọrụ
Ogologo a na-ebute ụzọ kachasị elu n'etiti ọrụ ndị yiri ya na ọnụ ọgụgụ nke ngwa ngwa dị na ya. A na-enye ngwọta maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị smartphones niile na-ewu ewu n'aka ọtụtụ ndị na-emepụta.
Usoro nbudata dị nnọọ ka nzọụkwụ maka nbudata ngwugwu sitere na ebe nrụọrụ weebụ Xiaomi ọrụ.
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ihe nlereanya nke ngwaọrụ site na listi (1) ma ọ bụ chọpụta smartphone achọrọ iji mpaghara ọchụchọ (2).
Kpebisie ike ụdị ugbochi nke a ga-ebudatara - kwa izu (onye mmepụta) ma ọ bụ nke nwere ike.
Na ịpị bọtịnụ ahụ "Download ngwa ngwa", na-eme n'ụdị nke gbara ndụ gburugburu nke nwere ihe oyiyi nke akụ ahụ na-egosi.
Ndị ọrụ MiuiPro emepewo ma na-akwado ọrụ mIUI na-akwado na Belarus. Iji hụ na ọnụnọ nke asụsụ Russian dị na ngwa ngwa ha, ndị mmepe na - eji nchekwa ụlọ ọrụ miui.su. Usoro os sitere na MiuiPro bu ihe di iche site na set-ons, ma gunye kwa otutu ihe.
Tụkwasị na nke a, ndị MiuiPro na-arụ ọrụ na-ahapụ ma melite ngwanrọ ndị ọzọ dị iche iche, n'ọtụtụ ọnọdụ, bara ezigbo uru nye ndị ọrụ nke MIUI.
Ịnwere ike ibudata nchịkọta site na os sitere na MiuiPro na ebe nrụọrụ weebụ oru ngo:
Download MiuiPro ngwa ngwa site na saịtị gọọmentị
Dị ka otu ndị gara aga anyị tụlere, usoro nbudata ngwugwu na ngwa ngwa dị ka usoro na weebụsaịtị Xiaomi.
Chọta ihe nlereanya.
Ọ bụrụ na nhọrọ a dị maka ngwaọrụ a kapịrị ọnụ, anyị na-achọpụta ụdị ngwanrọ (saịtị ahụ nwere nanị izu ụka na ported firmware).
Push bọtịnụ "Download" n'ụdị epe agba gburugburu na akụ na-egosi.
Anyị na-akwado ọchịchọ anyị iji nweta MIUI gbanwere ya site na MiuiPro site na ịpị bọtịnụ "DOWNLOAD FIRMWARE" na igbe na-arịọ.
Esemokwu dị iche iche n'etiti MIUI software nke ìgwè Multirom na-enye gụnyere, nke mbụ, ndị mmepe na-eji uru nke aka ha maka ịsụgharị interface a na-akpọ Methic, yana inwe ntinye aka nke asụsụ Russian nke eji mee ihe. Tụkwasị na nke ahụ, ngwọta sitere na Multirom na-eji ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche na tinye-ons.
Iji budata nchịkọta na ngwanrọ site na Multirom ị ga - eso njikọ:
Nbudata ngwa ngwa site na nchịkọta ọrụ
Mgbe ịpịrị njikọ ahụ, anyị na-agbaso ụzọ maara. Họrọ otu ihe nlereanya
ma pịgharịa bọtịnụ ahụ "Download" na windo nke meghere.
Ọ gaghị adị oke mma ịcheta ọnụ ọgụgụ dị ọtụtụ maka ọdụ ngwaọrụ nke ndị na-emepụta ihe ọzọ karịa Xiaomi,
nakwa dị ka nnweta naanị nsụgharị nke multirom firmware.
Ọzọ oru ngo nke na-anọchite anya mgbakọ MIUI na ndị ọrụ ya bụ Xiaomi.eu. Ntughari nke mkpebi nke otu bụ n'ihi ọnụnọ ha na mgbakwunye na Russian, ọtụtụ asụsụ ndị Europe. Banyere ndepụta nke mgbakwunye na ndozi, mkpebi nke otu ahụ dị nnọọ ka MIUI Russia software. Iji budata ngwa ngwa Xiaomi.eu, ị ga-aga obodo ndị ọrụ obodo.
Download Xiaomi.eu firmware site na ukara website
Ebe nrụọrụ ahụ dị na njikọ n'elu bụ ebe a na-arụ ọrụ, ịchọpụta ihe ngwọta achọrọ dịtụtụghị ma ọ bụrụ na atụle nbudata nbudata sitere na akụ ndị ọzọ na-etinye aka na nsụgharị na mmepe nke IISI. Ka anyi buru ndi ozo n'uzo a.
Mgbe ị na-ejide isi peeji nke, pịa njikọ ahụ "Mmekọrịta ROM".
N'ịgafe ala, anyị na-ahụ tebụl "Ngwaọrụ edepụtara".
Na tebụl a, ịchọrọ ịchọta ihe nlereanya nke ngwaọrụ nke ịchọrọ ngwanrọ software na kọlụm "Ngwaọrụ" ma cheta / dee uru nke cell dị na kọlụm "Aha ROM".
Gaa na otu n'ime njikọ dị n'elu tebụl. "Ngwaọrụ edepụtara". Pịa na njikọ ndị isiokwu ya bụ "DOWNLOAD WEEKLY", ga-eduga na saịtị nbudata maka onye nrụpụta ngwa ngwa, yana njikọ "DOWNLOAD STABLES" - ya mere, enwere ike.
Anyị na-achọta na ndepụta mepere emepe nke nchịkọta dịnụ aha ahụ nwere uru nke kọlụm ahụ "Aha ROM" maka otu ngwaọrụ sitere na tebụl.
Pịa na aha nke faịlụ a ga-ebugo, na window nke meghere, pịa "Malite Download".
Nhọrọ nke ngwa ngwa MIUI dị iche iche kwesịrị ịbụ isi ihe mmasị nke onye ọrụ ahụ kwadoro, yana ọkwa nke nkwadebe ya na njikere maka ule. Ndị bịara ọhụrụ na MIUI ndị nwere ngwaọrụ Xiaomi ga-ahọrọ iji usoro nsụgharị ụwa. Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-abụkarị ngwọta kasị mma dị ka ọ na-eji onye mmepụta ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa.
Mgbe ị na-ahọrọ ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mma nke MIU, onye ọrụ ahụ abụghị Xiaomi-ngwaọrụ, ma eleghị anya, ha ga-arụnye ọtụtụ ngwọta dị iche iche, mgbe nke ahụ gasịrị, ha ga-ekpebi nke kachasị mma maka otu ngwaọrụ.